အဆိုပြုနှုန်းထား ကျပ် ၄၈၀၀ ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာနိုင်သဖြင့် ပြန်လည်စဉ်းစာ?? - Yangon Media Group
အဆိုပြုနှုန်းထား ကျပ် ၄၈၀၀ ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာနိုင်သဖြင့် ပြန်လည်စဉ်းစာ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀- အနည်းဆုံးအခကြေး ငွေ အဆိုပြုနှုန်းထားကျပ် ၄၈၀၀ သည် လုပ်ငန်း ရှင်များရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာနိုင်သဖြင့် ပြန် လည်စဉ်းစားပေးရန် လှိုင်သာယာရှိလုပ်ငန်း ရှင်များကအကြံပြုထားကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တစ်ရက် လုပ်ခကျပ် ၄၈၀၀ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့် ကွက်စာတင်လာသည့် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် များမှ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကို ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်က လှိုင်သာယာ ကနောင် ခန်းမ၌ သီးသန့်တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
“”ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ကျပ် ၃၆၀၀ သတ်မှတ်တုန်းကလည်း ပိတ်တဲ့ စက်ရုံရှိခဲ့ပေမယ့် ဌာနဆိုင်ရာက ကျပ် ၃၆၀၀ ကြောင့်ပိတ်တယ်လို့မသုံးနဲ့ အော်ဒါမရလို့ ပိတ် တယ်ဆိုပြီးသာ စာတင်ခိုင်းပါတယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကြောင့် ပိတ်တဲ့စက်ရုံတွေ ရှိလာဦးမှာပဲ။ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေက အနိမ့် ဆုံးလုပ်ခကို ကျပ် ၄၀၀၀ ပဲသတ်မှတ်ပေးဖို့ တင်ပြထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်””ဟု မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် ဒေါက်တာခင် မောင်အေးက ပြောသည်။
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် အထည်ချုပ် နိုင်သည့်အပေါ်မူတည်ကာ အပိုဆုကြေးများ ထပ်ဆောင်းပေးနေရခြင်းဖြစ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အများဆုံး ရှာဖွေပေးနိုင်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်း ငဲ့ညှာရန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များက တင်ပြ ခဲ့ကြသည်။
“”ကျွန်မတို့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အများဆုံးရှာဖွေ ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကြတဲ့လုပ်သားတွေက အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း နှစ်တန်းသာတတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုညှိပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး အလုပ်ခန့်ပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်း တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ ရပ်တည် နိုင်ဖို့ ငဲ့ညှာစဉ်းစားပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်”” ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အလုပ်သမားများကမူ ကျပ် ၄၈၀၀ အဆို ပြုလုပ်ခနှုန်းထားသည် လုပ်သားများအတွက် လောက်ငမှုမရှိနိုင်သောကြောင့် ကျပ် ၅၆၀၀ နှင့်အထက် တိုးမြှင့်ပေးရန် တင်ပြကြသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနည်းဆုံးအခ ကြေးငွေသတ်မှတ်ရေး ကော်မတီအနေဖြင့် ကန့်ကွက်သူများ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးဦးမည်ဖြစ်ကာ ဇန်န ၀ါရီ ၃၁ ရက်တွင် ရွေပြည်သာမြို့နယ်၌ လည်း ကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့တွင် မြောက် ဥက္ကလာစက်မှုဇုန်၌ လည်းကောင်း၊ ယင်း နောက် UMFCCI နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးကော် မတီအတွင်းရေးမှူး ရန်ကုန်တိုင်းအလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးကိုကိုလင်းက ပြောသည်။
“”လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်ကတော့ ကျပ် ၄၀၀၀ ပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တင်ပြချက် တွေ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက တော့ အများစုက ကျပ် ၅၆၀၀ ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုချက်အပေါ်တော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကော်မတီအနေနဲ့တော့ ကန့်ကွက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ ရရှိ တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရက် ၃၀ အတွင်း အမျိုးသားကော်မတီကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်””ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် အဆိုပြုထားတဲ့ လုပ်ခကျပ် ၄၈၀၀ ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ အများဆုံးကန့်ကွက်ထား ခြင်းဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စသည့်တိုင်းများမှ အလုပ်ရှင် နှင့်အလုပ်သမားများပါ ကန့်ကွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ကော်မတီများအနေ ဖြင့်လည်း ယင်းကန့်ကွက်ချက်များကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး နောက်ထပ် အကြံပြုချက်များအား ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့မှ တစ်လအတွင်း အနည်းဆုံး အခ ကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော် မတီသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်ဘက်မှ ဆက်သွယ်လာပါက ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ပေးရန် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အဆင်သင့်ပြင??
ကလေးမြို့တွင် ညအချိန်ဆိုင်ကယ်စီး သူများနှင့်လမ်း လျှောက်သူများ ကို ရိုက်နှက် လုယက်မှုများ ??
‘အနုပညာလောကကို စဝင်တုန်းက တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး ငိုခဲ့ရတာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်’ ဟန်ေ
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းတွင် ခရီးသည်တင်ကား တစ်စီး မီးလောင်
ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွင် အန်ကာရာနှင့် အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တို့၌ တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန် ရှုံးနိမ်?
ကွယ်လွန်သူ စတိဖင်ဟော့ကင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သော ပို့စ်ကြောင့် နေမာ လှောင်ပြောင်ခံရ